Wenger : Fabregas Waxa Uu Ii Sheegay In Hal Sano Oo Kale Uu Sii Joogayo Barcelona - iftineducation.com
iftineducation.com – Wenger ayaa qiray in uu aaminsan yahay in Fabregas uu doonayo in uu sii joogo kooxda Barcelona inkastoo shaki badan uu hareeynayo mustaqbalka laacibkaas ee Cump Nou.
United aya dhawaan dalab ula timid Barca oo ku aadan Fabregas xilli Arsenal iyana la xusayo in wiilkooda ay isha ku hayaan maadaama hishiiskii Barcelona kula wareegeen laacibkaasi uu ku jiray qodob ah in haddii ay iska iibinayaan ay dib ugu soo celiyaan Arsenal .
Sidaas oo ay tahay Wenger kuma kalsoona in ay helayaan laacibkaasi isaga oo xusay in laacibkaas Fabregas uu doonayo in kooxdaas baaqi ku sii ahaado .
Wenger ayaa wariyaasha u sheegay in Fabregas uu go`aansaday in kooxda Barcelona uu sii joogo ugu yaraan hal sano uu dheeraad ah .
” Ma aqaan in ra`yigiisa uu badalay balse arinta hore isaga ayaa horay iigu sheegay” ayuu sii raaciyay Macalin Wenger .
Fabregas ayaa Arsenal ka huleelay xagaagii 2011-ka balse kuma guuleysan in Barcelona uu boos joogto ah ka xirto oo uu noqdo line up, waxa uu dhanka kale Wenger sheegay in Arsenal awoodaan in xagaagaan ay la soo hishiiyaan xiddiga United ee Rooney.